LPC « MMWeather Information BLOG
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ တစ်ကြော့ပြန်ဝင်ရောက်လာသည့် INVEST 91W မုန်တိုင်းဖြစ်လာဦးမည်
One comment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေ
By mmweather.ygn, on October 23rd, 2012%
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ရနောင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၆၀ ခန့်၊ Nakhon Si Thamarat ခရိုင် Tha Sala မြို့ အရှေ့ဘက် ၄၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် ပင်လယ်ပြင်မှ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၄ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
93W 23 Oct 2012 0600Z Location: 8.7 100.6 Winds: 15 knots Central Pressure: . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေ
Leaveacomment Uncategorized ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W သည် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ရနောင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၄၀ ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ အားကောင်းလာသည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း ပင်လယ်ပြင်အပူချိန်မြင့်တက်နေမှုများကြောင့် သတိပြုစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Animation ပုံများအရ 93W သည် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး ရနောင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ View animation
93W – 23 Oct 2012 0000Z Location: 8.4 101.8 Winds: 15 . . . → Read More: ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ကပ္ပလီပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B အာရေဗျပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized ဂူအမ်ကျွန်းအနီးမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W
By mmweather.ygn, on September 19th, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဂူအမ်ကျွန်းအနီးတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း မရှိပဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ဂူအမ်ကျွန်း အနောက်ဘက် မိုင် ၂၉၀ ခန့်၊ Palau ကျွန်း အရှေ့မြောက်ဘက် ၅၆၅ မိုင်ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှ မိုင် ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
92W – 19 Sep 2012 0000Z Location: 13.2 140.5 Winds: 15 knots Central . . . → Read More: ဂူအမ်ကျွန်းအနီးမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W
One comment Uncategorized ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ်များ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on August 31st, 2012%
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များ အရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ Palau ကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၀၀ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် ၉၈၅ မိုင်ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W နှင့် ဆိုင်ဖန်ကျွန်း အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၃၅၀ ခန့်၊ မနီလာမြို့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၁၄၀၀ ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W တို့စတင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါသည်။
91W – 31 Aug 2012 0000Z Location: 5.4 132.1 Winds: 15 knots . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ်များ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ